သာမညဆရာတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
သာမညဆရာတော် ဦးဝိနယ သည် ထင်ရှားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုး ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် မေတ္တာတရားကြောင့် လူသိများ ထင်ရှားခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့အနီး သာမညတောင်
နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၃(2003-11-29) (အသက် ၉၂–၉၃)
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင် ကိုရင်ဝတ်ခဲ့ပြီး အသက်နှစ်ဆယ်ရောက်သည့်အခါတွင် မော်လမြိုင်မြို့ ရတနာဘုံမြင့်ကျောင်း၌ ရဟန်းဝတ်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် မွေးဖွားရာ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ ကော်ကျိုက်ရွာအနီးရှိ သာမညတောင်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် တရားစခန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ကာ တရားပြသမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ထိုဘုန်းကြီးကျောင်းရှိရာပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကို အသားစားမှုမရှိသည့် သတ်သတ်လွတ်စားရာနယ်မြေ ဘေးမဲ့ဒေသအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်လယ်တွင် ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုသူများသည် သာမညတောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၀၀၀ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းပတ်လည်ရှိ လွတ်လပ်နေသည့် မြေများကို အနည်းငယ်စီ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ဆရာတော်၏ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုနှင့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ဆရာတော်အား "အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိက" ဘွဲ့တံဆိပ် ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းကျောင်းများအတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ မြဝတီနှင့် မဲဆောက်ကို ဆက်သွယ်ထားသည့် သံလွင်တံတားကို တည်ဆောက်ခြင်းစသည့် ပညာရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကြောင့် ဆရာတော်ကို လူသိများကြသည်။ သို့သော်ငြားလည်းဆရာတော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူသိရှင်ကြားထောက်ခံနေစဉ်တွင် ပြည်နယ်ဥပေဒနှင့်အမိန့်ပြင်ဆင်ရေးကောင်စီ၏ ရန်ကုန်မြို့သို့ ကြွရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုကို လူသိရှင်ကြားပင် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဆီးချိုနှင့် နှလုံးရောဂါကို ခံစားရကာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်၏ ရုပ်ကလာပ်သည် ထူးဆန်းစွာ ဖယ်ရှားခြင်းခံရခဲ့သည်။ ထို့နောက် လေးရက်ကြာပြီးနောက်တွင် အမည်မသိရှိရသူတစ်ဦးက ဆရာတော်၏ ရုပ်ကလာပ် မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပြီး ကော့ကဒါ ရွာ၏ စေတီတော်ငယ်တည်ရှိရာနေရာတွင် တွေ့ရှိရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ယတြာ ချေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု လူများအကြား ကျယ်ပြန့်စွာ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။
↑ Houtman၊ Gustaaf (1999)။ Mental Culture in Burmese Crisis Politics။ 33။ ILCAA။ ISBN 9784872977486။
↑ Ven. Tharmanya Sayadaw - U Vinaya (1910- 2003)။ Dhamma Web။ 19 June 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Seekins၊ Donald M. (2006)။ Historical Dictionary of Burma (Myanmar)။ Scarecrow Press။ ISBN 9780810854765။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Tosa, Keiko (2009). "The Cult of Thamanya Sayadaw: The Social Dynamism ofaFormulating Pilgrimage Site". Asian Ethnology 68: 239–264. Nanzan Institute for Religion and Culture.
↑ Jordt၊ Ingrid (2007)။ Burma's Mass Lay Meditation Movement။ Ohio University Press။ pp. 150–151။ ISBN 9780896802551။
↑ "Revered Monk Passes Away"၊ The Irrawaddy၊ 1 December 2003။ 14 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ May၊ Amy Gold။ "Will Thamanya Sayadaw’s Body Ever Rest in Peace?"၊ The Irrawaddy၊ June 2008။ 14 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သာမညဆရာတော်&oldid=644172" မှ ရယူရန်
၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။